स्वास्थ्य बीमा सरकारले चलाउने कार्यक्रम होइन | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता स्वास्थ्य बीमा सरकारले चलाउने कार्यक्रम होइन
on: June 22, 2018 अन्तरवार्ता
स्वास्थ्य बीमा सरकारले चलाउने कार्यक्रम होइन
एसके तमोट, महाप्रबन्धक, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल
बीमा बजारमा नयाँ थपिएको बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्सले बुधवारदेखि कारोबार शुरू गरेको छ । योस“गै नेपालमा निर्जीवन बीमा कम्पनी १८ ओटा पुगेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना तथा अन्य व्यक्ति गरी १ सय ८२ जना संस्थापक शेयरधनीको लगानी रहेको यो कम्पनीले छिट्टै सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । विसं २०२४ वैशाखमा नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरेका एसके तमोट हाल जनरल इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक छन् । यसअघि उनी रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्समा कार्यरत थिए । जनरल इन्स्योरेन्सले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी आफूलाई उभ्याउनेछ भन्नेबारे बीमा क्षेत्रका अनुभवी कम्पनीका महाप्रबन्धक तमोटस“ग अभियान संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी :
निर्जीवन बीमा कम्पनीको रूपमा सञ्चालन शुरू गरेको जनरल इन्स्योरेन्सले बजारमा रहेका १७ कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्दै छ ?
हामी बजारमा रहेका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा नगरेर कम्पनीको मिशन, भिजनअनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । हामीसँग आफ्नो समूह र जनसम्पर्क छ । सोहीअनुसार नै कम्पनीलाई अगाडि बढाउने हाम्रो उद्देश्य छ । साथै, हामी अन्य बीमा कम्पनीभन्दा फरक तरिकाले बजारमा उपस्थित हुन्छौं । हामीले असारभित्र बढीमा १५ ओटा शाखा विस्तार गर्ने तयारी गरेका छौं । काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्जलगायत शहरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शाखा स्थापना गर्ने योजना छ । कम्पनीले ६ महीनाभित्र ४५ ओटा शाखा कार्यालय खोल्नेछ । शाखा कार्यालय खोलेपछि बीमा व्यवसायलाई सर्वसाधारणको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं । यस्तो कार्यले बीमा समितिले लिएको लक्ष्य पूरा गर्नेछ । आगामी दिनमा सर्वसाधारणका लागि बीमाका नयाँनयाँ प्याकेज लिएर देशैभर शाखा सञ्जालमार्फत हामी सेवा विस्तार गर्ने सोचमा छौं ।
यो कम्पनी अन्य कम्पनीभन्दा केमा पृथक् छ ?
अहिले १ अर्बको चुक्तापूँजी पुर्‍याएर कम्पनीलाई नयाँ संरचनामा लगिएको छ । हामी पनि त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौं । हामीले चुक्तापूँजी पुर्‍याएरै कम्पनी स्थापना गरेका हौं । हामीले चुक्तापूँजीको ७० प्रतिशत शेयर संस्थापक शेयर रहनेछ भने बाँकी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन गर्नेर्छौं । अरूको व्यवसाय अगाडि बढिरहेको छ । हामी शून्य अवस्थामा छौं । जसअनुसार हामी व्यवसायलाई अगाडि बढाउने तयारीमा छौं । एकैपटक गर्छु भनेर हुँदैन । त्यसका लागि हाम्रो पहुँचले पनि भ्याउँदैन । तर, हाम्रो पहुँच जहाँ छ, त्यसमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छौं ।
कम्पनीका प्रडक्ट कस्ता छन् ? कसरी सेवा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
अहिले हामीसँग नयाँ बीमा योजना छैन । चलनचल्तीका बीमा योजना नै विक्रीवितरण गर्ने योजनामा छौं । अहिले अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, घर (हाउसहोल्ड) बीमा, ट्राभल बीमा, मेडिकल बीमा, दुर्घटना बीमा, नगद बीमा, चोरीबाट भएको तोडफोड (वग्र्लरी) बीमाआदि योजना रहेका छन् । हाम्रो उद्देश्य नयाँ योजना ल्याउनुभन्दा पनि सेवालाई सहजीकरण गर्ने हो । हामी सेवालाई सहजीकरण गर्छाैं र विस्तारै बजारको आवश्यकताअनुसार नयाँ बीमा योजना पनि ल्याउँछौं । हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, कृषि बीमालगायत परम्परागत बीमा योजनासमेत ल्याउनेछौं । थप बीमा योजनाका लागि समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाएका छौं ।
सरकारले सहुलीयत दरमा सञ्चालन गर्दै आएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हुँदाहुँदै बीमा कम्पनीले ल्याएको यस्तो योजनामा सर्वसाधारण आकर्षित हुन्छन् त ?
सर्वसाधारण हामीले दिने यस्तो बीमा योजनामा पनि फाइदा देख्छन् । सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्‍यो भने अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यसले अन्य बीमाको दायरा पनि बढ्ने सम्भावना छ । यो सरकारले चलाउने कार्यक्रम पनि होइन । बजारमा यति धेरै कम्पनी छन् । सरकारले दिने सुविधा हामी पनि दिन सक्छौं । यसो गरे निजीक्षेत्र र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ । यसका लागि हामी सबै मिलेर पहलकदमी गर्दै छौं ।
बीमा बजारमा प्रतिस्पर्धी भएर उत्रँदा कस्ता चुनौती आइपर्न सक्लान् ?
स्वाभाविक रूपमा बजारमा धेरै चुनौती छन् । त्यसको सामना त हामीले गर्नैपर्छ । तर, हामी त्यसको पछि नलागेर कम्पनीको मिशन, भिजनअनुसार अगाडि बढ्ने योजनामा छौं । यस क्रममा पनि चुनौती आउनसक्ने सम्भावना छ तर बीमाको विकास र आवश्यकताअनुसार बजारमा त्यति ठूलो चुनौती छैन । बजारमा लामो इतिहास बोकेका कम्पनी छन् । उनीहरू प्रतिस्पर्धी हुन्छन् नै । तर, हामीले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी रूपमा लिएका छैनौं । बजारमा रहेका १७ कम्पनीले यतिका बिजनेश गरेका छन् भने हामी पनि त्यो गर्न सक्छौं । हामी पनि पुरानै कम्पनी जसरी अगाडि बढ्छौं । यद्यपि, बजारले हामीलाई प्रतिस्पर्धामा लैजान्छ । तर, एकअर्कामा नोक्सानी नहुने गरी प्रतिस्पर्धा गर्छाैं ।
बीमा बजारमा कस्ता अवसर देख्नुभएको छ ?
बीमा बजारमा अवसर प्रशस्त छन् । अहिले देश सङ्घीयतामा गएको छ । यसले बीमा क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यलाई सङ्केत गरेको छ । यसलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले पनि प्रदेशअनुसार शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं । विस्तारै हामी गाउँगाउँ जान्छौं । स्थानीय तह कार्यान्वयन भएकाले अब गाउँमा पनि बीमाको भविष्य देखिन्छ । त्यसकारण कुनै पनि बीमा कम्पनीले स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेर व्यावसायिक विकास गर्न सक्छन् ।
अनिवार्य बीमा भनिएका मोटर बीमा, वैदेशिक रोजगार (म्यादी) जीवन बीमालेख बाहेकमा सर्वसाधारणलाई आबद्ध गराउन कम्पनीको भूमिका कस्तो रहनेछ ?
सबै प्रकारका बीमा योजनामा लघुबीमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । हामीले सर्वसाधारणलाई बीमामा आबद्ध गराउन लघुबीमा लिएर गाउँगाउँ जाने योजना बनाएका छौं । अन्य कम्पनीले पुलसँग मिलेर लघुबीमा गर्ने गरे पनि हामी छुट्टै रूपले प्रभावकारी रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने सोचमा छौं । हामी बीमाको प्रचारप्रसारमा जोड दिनेछौं ।
कारोबार विस्तारका लागि अभिकर्ता र कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
कम्पनीमा अभिकर्ता मुख्य अङ्ग हो । हामी असार १३ गते अभिकर्ताका लागि तालीम सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन गर्दै छौं । तर, साधारण बीमाका लागि अभिकर्ता नभए पनि हुन्छ । कम्पनीमार्फत पनि गर्न सकिन्छ । हामीले बजार व्यवस्थापनका कर्मचारीमार्फत त्यसको व्यवस्था गरेका छौं । त्यसरी बीमा गर्दा १० प्रतिशत छूट हुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, हामी हाम्रो व्यावसायिक विकासका लागि अभिकर्तालाई पनि सँगै लिएर जान्छौं । सोहीअनुसारको योजना पनि तयार पारिएको छ ।
पुनर्बीमाको सवालमा कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ ? अहिले २० प्रतिशत नेपालमा गर्ने भन्नेबारे के गर्नुभएको छ ?
जनरल इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन इण्डियासँग हामीले पुनर्बीमा गर्नेछौं । सोहीअनुसार कम्पनीले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हामी सोही कम्पनीमार्फत पुनर्बीमा गर्ने योजनामा छौं । यस्तै, नेपाल सरकारले बजेटमार्फत २० प्रतिशतको पुनर्बीमा नेपालमै गर्ने गरेको व्यवस्थालाई पनि हामीले सकारात्मक लिएका छौं । यसको कार्यान्वयनबारे अहिले समितिमा छलफल भइरहेको छ । जे जस्तो निर्णय हुन्छ, त्यो हामी मान्न तयार छौं ।
बीमा कम्पनीहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती र शेयरमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यो कम्पनीको लगानीको स्थिति कस्तो छ ?
हामीले हाम्रो पूँजीको ७० करोडमध्ये ५५ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैङ्कको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका छौं । बाँकी विभिन्न खर्चका लागि राखेका छौं । हामी बीमा प्रिमियम जे जति सङ्कलन गर्छौं, यो सबै बीमा समितिले तोकेअनुसारको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । बीमा समितिले लगानीसम्बन्धी नीतिमा दिएको निर्देशनमा वाणिज्य बैङ्कमा ३५ प्रतिशत, विकास र फाइनान्स कम्पनीमा १५ प्रतिशत र अन्य शेयरमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हामी यसै अनुसार जान्छौं ।
यो कम्पनीले बीमा जनचेतनाका लागि के गर्दै छ ?
हामी प्रचारप्रसारका लागि पत्रपत्रिका, टीभी, रेडियोलगायत सञ्चारमाध्यममा त जाने नै छौं । यसको अलावा पनि सचेतनाका कार्यक्रम गर्नेर्छौं । बीमा समितिले यसमा अनिवार्य व्यवस्था गरेकाले यसलाई विशेष ध्यान दिन्छौं । यद्यपि, प्रचारका लागि हामीले व्यक्तिगत रूपमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा प्रायः गरीबी र चेतनाको अभावले बीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक अवस्था मजबुत भएका शहरका मानिसले समेत बीमा गर्न अग्रसर नहुने स्थिति छ । हामी सबैलाई लक्षित गरी हाम्रा प्रडक्ट बिकाउनेछौं ।